Maxaa ku cusub nooca cusub ee Adobe InDesign CC 2015.2? | Abuurista khadka tooska ah
Adobe ayaa sii deysay cusbooneysiin dhowr barnaamijyo waaweyn oo ah Cloud Cloud, oo ay ku jiraan InDesign CC 2015. In kasta oo qodobbada udubdhexaadka u ah arjiga iyo dareenka is-dhexgalku ficil ahaan u sii jiro, haddana horumarinno yaryar ayaa lagu soo daray taas oo ka dhigaysa naqshadeeyaha khibradda dheecaan badan
Waxaan heli doonnaa jawi waxoogaa caqli gal ah kaas oo ku siin doona tiro badan oo beddelaad ah iyo xulashooyin qaabeyn ah. Maxay yihiin riwaayadaha ugu waaweyn ee uu soo bandhigo guriga Adobe?
Noocyadooda 2015.2, codsiyada waaweyn waxay bedeleen isdhexgalka soo dhaweynta si loo soo bandhigo shaashadaha cusub ee guriga oo ay ku jiri doonaan shaqooyin cusub oo dareen leh sida helitaanka faylalka ugu dambeeyay, sameynta feylal cusub, maareynta maktabadaha iyo horudhaca iyo helitaanka agab dheeri ah. casharro. In Adobe InDesign shaashadda bilowga hadda laga bilaabo waxay noqon doontaa sidan:
Intaas waxaa sii dheer, astaamaha uu soo saaray qaybtani waxaa ka mid ah taxane ah oo kor loogu qaadayo shaqada maktabadda CC iyo maaraynta, oo ay ku jiraan kuwa soo socda:
Dhammaan xubnaha koox ku dar maktabadda hal guji, oo ay ku jiraan kooxaha midabada iyo kooxaha qaabka.
Awood u leh in lagu daro mowduucyada midabbada shaqsiyadeed iyo isugeynta galka laalaabka iyada oo aan midabbo lagu dabaqin walxaha ku yaal boggayaga.
Awood u leh in lagu daro qaabab kala duwan, jajabyo ama sawirro maktabad leh hal guji.
Sidoo kale hadda waa suurtogal in la raadiyo maktabadaha CC.
Waxaan sidoo kale yeelan doonaa guddi midab leh oo mowduucyo horumarsan leh:
Mid kale oo ka mid ah awoodaha cusbooneysiintan cusub ayaa ah in habka loo abuurayo dukumiintiyada qaab PDF ah uu noqon doono mid aad ufudud sidoo kale waxay bixin doontaa marin u helid dheeri ah iyadoo lagu mahadinayo awoodda cusub ee loogu talagalay cinwaanka cinwaanka faylka PDF iyo muujinta cinwaanka illaa wada hadalka dhoofinta.
Waxaan sidoo kale muujin karnaa isbeddelada kale sida:
Kordhinta tirada dukumiintiyada dhowaa ee la daawan karo (illaa 20).
Cabirka bogga cusub ee loogu talagalay daabacaadda Webka iyo Dijital.
Awoodda samaynta Eyedropper-ka ayaa laga hormariyaa aaladda Mawduuca Midabka.
Waxyaabaha kor ku xusan ka sokow, nooca cusub waxaa ka mid ah kaabayaasha adeegga daabacaadda ee khadka tooska ah, astaamo cusub oo loogu talagalay helitaanka iyo xulashada glyphs, iyo goob shaqo oo gaar ah oo dadka isticmaala aaladaha taabashada ay si dhakhso leh u soo sawiraan naqshado cusub oo ay la socdaan dhaqdhaqaaqyo aad u fudud. dalab
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Maxaa ku cusub nooca cusub ee Adobe InDesign CC 2015.2?
Maxay u egtahay in looga shaqeeyo bilaash xirfadaha kale?